Author Topic: Year 2071 review (Nepali Film Industry) सफल र असफल फिल्मको कहानी (Read 7427 times)
« Reply #10 on: April 13, 2015, 12:10:12 AM »
जेठ ९ गते रिलिज भएको फिल्म ‘हँसिया’ बाट नेपाली फिल्म क्षेत्रमा डेब्यू भएकी नायिका हुन्, हेमा श्रेष्ठ । एक्सनप्रधान यो फिल्मबाट उनले एक्सन नायिकाका रूपमा प्रशंसा समेत बटुलिन् । फिल्म हिट हुन नसके पनि Anna-Sharmaउनको अभिनय रजतपटमा ‘हिट’ भयो । स्टन्टका दृश्यसमेत दिएकी ‘हँसिया’ मा उनको एक्सन दमदार थियो । जसकारण मोडल तथा कोरियोग्राफर समेत रहेकी हेमालाई यही फिल्मले ‘एक्सन हिरोइन’ का रूपमा जम्ने सम्भावना देखाएको छ । तर, हेमा अब फिल्म क्षेत्रमा नदेखिने बुझिएको छ ।
यही वर्ष नेपाली फिल्मको इतिहासमा पहिलोपटक दुवै हात नभएका हिरो बने, सुदर्शन गौतम । उनलाई नायिका रेखा Sudarshan-gautamथापाले आफ्नै फिल्म ‘हिम्मतवाली’ बाट आफ्नो जोडीका रूपमा डेब्यू गराइन् । ‘अपांगता असक्षमता होइन’ भन्ने तथ्यलाई सुदर्शनले अभिनयमार्फत प्रस्ट पारे । नेपाली मूलका क्यानडियन नागरिक सुदर्शनले सगरमाथा आरोहण गरेर गिनिज बुकमा नामसमेत लेखाएका छन् । अहिले उनी ‘सुपरहिरो’ फिल्ममार्फत फेरि अभिनयलाई निरन्तरता दिने तयारीमा रहेको बताउँछन् ।
« Reply #11 on: April 13, 2015, 01:16:26 PM »
वर्ष २०७१ : वर्षका हिट हिरोइन
पुरुष पात्र प्रधान नभई फिल्म चल्दैन भन्ने पुरातन मान्यता यो वर्ष विस्तारै परिवर्तन भएको देखिन्छ । वर्ष २०७१ मा केही महिला विषय र चरित्र प्रधान रहेका फिल्म आए । यसवर्ष भुमिका, अभिनय र चर्चाका कारण निम्न पाँच हिरोइन हिट रहे ।
पि्रयंका वर्ष २०७१ मा भुमिका, अभिनय र व्यस्तता तीन कारणले चर्चामा रहिन् । उनी फिल्म 'सुन्तली'मा केन्दि्रय भुमिकामा देखा मात्रै परिनन्, अभिनयको तारिफ पनि भयो । त्यसैगरी फिल्म 'माला'मा उनले भड्केको आत्माको चरित्रमा अभिनय गरेर प्रयोग पनि गरिन् ।
पि्रयंकाका वर्षभरीमा छ फिल्म आए भने आइटम डान्स गरेका दुई र केमियो रहेको एक फिल्म पनि यसै वर्ष आउँदा दर्शकको नजरमा उनी वर्षैभरी छाईरहिन् । यसबाहेक विज्ञापन र म्युजिक भिडियोमा पनि उनको वचस्र्व नै रह्यो । वर्र्षको अन्त्यमा आएको 'नाई नभन्नु ल ३'ले बक्स अफिसमा पनि सफलता दिलायो ।
बलिउड अभिनेता शाहरुख खानको कार्यक्रममा नाचेर होस् वा आइटम गीत र म्युजिक भिडियोमा नाचेर पि्रयंकाले आफ्नो ग्ल्यामर छवीको सही मार्केटिंग गर्न सफल रहिन् । यसैले होला 'मेरो वेष्टप|mेन्ड', 'आवरण', 'पुन्टे परेड', 'षडङ्ग' असफल भए पनि पि्रयंकाको करिअरमा खास फरक पारेन । बरु २०७१ बाटै उनले आफुलाई गायनमा पनि प्रयोग थालिन् । उनको गलाको नतिजा भने वर्ष २०७२ ले गर्ला ।
२. रेखा थापा
रेखा वर्ष २०७१ मा 'हिम्मतवाली' बनेर दर्शकमाझ आईन् । उनैले निर्देशन समे तगरेको यो फिल्मबाटै रेखाले काफी चर्चा बटुलिन् । यो फिल्ममा दुवै हात नभएका सुदर्शन गौतमलाई 'नायक'का रुपमा लिइन् । सुदर्शनसँग रेखाको प्रेमसम्बन्धका समाचार पनि आए ।
यही वर्ष आएको अर्को फिल्म 'तथास्तु' सफल नभए पनि उनी यसमा केन्दि्रय भूमिकामा थिइन् । आगामि फिल्ममा बलात्कार पीडित दुई युवतीलाई 'ब्रेक' दिने घोषणाले पनि उनलाई चर्चा दिलायो । उनको अर्को फिल्म 'दमदार' चाहिँ आए गएको दर्शकलाई खासै पत्तो भएन ।
३. नम्रता श्रेष्ठ
नम्रताका लागि यो वर्ष राम्रो रह्यो । 'नोभेम्बर रेन' मा आर्यनसँगको उनको केमेस्ट्रीलाई दर्शकले रुचाईदिए । 'सोल सिस्टर' नामक असफल फिल्मबाट उनी निर्माता पनि बनिन् । उनले अभिनय गरेका 'ताण्डव' र 'सम्बोधन'ले रिलिज अघि चर्चा पाए पनि सफल भने भएनन् ।
बरु उनले अभिनय गरेको नाटक 'यार्मा'ले राम्रै चर्चा दिलायो । उनको नाम कहिले 'ताण्डव' कोस्टार आशिष राना 'लाहुरे'सँग जोडियो त कहिले अर्का एक व्यवसायीसँग ।
४. शिल्पा पोखरेल
यस वर्ष पुराना हिरोइन मात्र होइन, केही नयाँले पनि आपmनो चमक देखाए । तिनमा एक हुन्, शिल्पा पोखरेल । शिल्पाका यो वर्ष दुई फिल्म आए 'लज्जा' र 'हवल्दार सुन्तली' । छवि ओझाले निर्माण गरेका यी दुवै फिल्ममा उनको मुख्य भूमिका थियो । शिल्पालाई रेखाको विकल्पका रुपमा पनि हेरियो । 'लज्जा'ले उनलाई राम्रै चर्चा दिलायो भने दोहोरो भूमिका भएको 'हवल्दार सुन्तली'ले सफलता पाइरहेको छ । करिश्मा मानन्धरले निर्माण गरेको फिल्म 'फागु'मा पनि शिल्पा मुख्य भूमिकामा देखिदैछिन् ।
५. रिश्मा गुरुङ
रिश्मा यो वर्षको सुपरहिट फिल्म 'कबड्डी'बाट फिल्ममा आइन् । दयाहाङ राई र निश्चल बस्नेतका बीच कबड्डी गराउने पात्रका रुपमा तडकभडक विनाको भूमिका दर्शकले 'नोटिस' गरे । सामान्तया ः नेपाली फिल्ममा हिरोइनको काम नाचगान गर्ने र केही 'मर्मभेदी' संवाद बोल्ने हुन्छ । यिनको भूमिका त्यस्तो थिएन । तैपनि, थकाली समुदायकी युवतीको भूमिकामा यी गुरुङसेनी अभिनेत्री जमिन् । सुटिंग भइरहेको यो फिल्मको सिक्वेल 'कबड्डी कबड्डी'मा पनि रिश्मा मुख्य भूमिकामा छन् । अपिल विष्टको फिल्म 'झुम्कि'मा पनि उनी मुख्य भूमिकामा छन् । धेरै हल्लाखल्ला नभए पनि र मिडियामा ग्ल्यामरस हिरोइनका रुपमा नछाए पनि अभिनेत्रीका रुपमा रिश्माले आफ्नो स्थान बनाउँदै गएकी छन् ।
« Reply #12 on: April 13, 2015, 02:34:28 PM »
राजेशदेखि आर्यनसम्म, जसले गरे यो बर्ष बिहे
मिथिला र झरनाको बिहे पनि चर्चामा
७ वर्ष अगाडि बेलायती नागरिकसँग ईन्गेजमेन्ट गरेर पनि बिबाह नगरेकी नायिका एवं मोडल झरना बज्राचार्यको विषयमा कतिले पछिसम्म पनि टिप्पणी गरिरहे । ‘कतै त्यो सुटिङ त थिएन ।’
लगभग सुटिङकै शैलीमा उनको अर्को खबर सार्वजनिक भयो । झरनाको बिबाह । पूर्व मिस नेपाल समेत रहेकी झरनाले भारतीय मुलका मलेसियन नागरिक राहुल अग्रवालसँग बिबाह गरिन् । चलचित्र ‘सेप mल्याण्डिङ मा काम गर्दा उनीहरु एक अर्कासँग नजिकिएका थिए ।
नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा यो वर्ष पछिल्लो पटक बिबाह गर्ने जोडी यीनै हुन् । सम्बन्ध जोड्नेहरु भन्दा तोड्नेहरु बढ्दै गएको चलचित्र क्षेत्रमा यो वर्ष आधा दर्जनले आफ्ना जोडी बाँधेका छन् ।
पटक-पटक विवादमा आएकी नायिका सुमिना घिमिरेले पनि गएको फागुनमा बिबाह गरिन् । पेशाले पाइलट रोशन सापकोटासँग बिबाह गरेकी सुमिनाले प्रेमपछि बिबाह गरेको बताएकी छिन् । एउटा म्युजिक भिडियोको सुटिङको क्रममा उनीहरुको भेट भएको थियो ।
एक महिनाको अन्तरमा दुई नायकको बिहे
चकलेटी नायक आर्यन सिग्देलले बिबाह गरेको ठ्याक्कै एक वर्ष भयो । वर्ष ०७१ को प्रारम्भ (वैशाख)मै प्रेमिका सपना भण्डारीसँग बिबाह गरेका थिए उनले ।
आर्यनले बिहे गरेको एक महिनापछि जेठको दोश्रो साता नायक राजेश हमालले लगनगाँठो कसे । ५० वर्षका हमालले मोडल मधु भट्टराईसँग बिबाह गरेका हुन् । ७ वर्षको प्रेमपछि बिबाह गरेको हमालको भनाई छ । आफु भन्दा २० वर्ष कम उमेरकी युवतिसँग बिबाह गरेका हमाल अहिले खुसी छन् । हमालको बिहेले सर्वाधिक चर्चा पनि पायो । साथमा लामो समयदेखि ‘बिहे कहिले गर्नुहुन्छ’ भन्ने प्रश्नले पनि जवाफ पायो ।
‘नाई नभन्नु ल’कि नायिका ऋचा सिंह ठकुरी सुटुक्क बिहे गर्ने नायिकाको रुपमा चिनिन्छिन् ।
अष्टे्रलियामा बस्दै आएका गजेन्द्र थापासँग असारको पहिलो साता बिहे गरेकी थिईन् उनले । फिचर चलचित्रको अतिरिक्त केही म्युजिक भिडियोमा समेत अभिनय गरेकी छिन् उनले ।
रंगमञ्चमा विशेष दख्खल राख्ने निर्देशक अनुप बराल र नायिका दिया मास्केले पनि गएको असारको तेस्रो हप्ता बिबाह गरे । ६ वर्ष लामो प्रेमपछि बिबाह गरेका उनीहरु अहिले चलचित्र र रंगमञ्चमा सक्रिय छन् ।
महिना नपुग्दै शोक
नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठ र नायिका श्वेता खड्काको बिबाह नेपाली चलचित्र उद्योगको अहिलेसम्मको अविस्मरणीय घटनाको रुपमा चिनिन्छ । श्वेतासँग बिबाह गरेको एक महिना नपुग्दै श्रीकृष्णको निधन भएको थियो ।
‘कहाँ भेटिएला’ मा काम गर्ने क्रममा भेटिएका यी जोडीले पाँच वर्षको प्रेमपछि बिबाह गरेका थिए । बिबाह लगत्तै बिरामी भएका श्रीकृष्णको उपचारकै क्रममा निधन भएको थियो ।
मिथिलाको बिहे पनि चर्चामा
यो बर्ष बिहे गर्ने कलाकारको सूचीमा मिथिला शर्मा पनि पर्छिन् । मिथिलाले पूर्व आइजीपी मोतीलाल बोहरासँग यसै बर्ष बिहे गरिन् ।
मिथिलाले बोहरासँग गरेको बिहेले सर्वाधिक चर्चा पायो । कारण मिथिला बोहराकी दोश्री श्रीमती थिइन् । ७५ बर्षका मोतीलालसँग मिथिलाले उमेर ढल्कदै गएपछि बिहे गरेकी थिइन् ।
यो बर्ष नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा कलाकारले जोडी खोज्ने काम गरे । जसका कारण पनि उनीहरु बर्षैभरि चर्चामा रहे । बर्षको अन्त्यमा नायक रेश महरठ्ठाले पनि प्रेमिका आश्मी घिमिरेसँग इन्गेजमेन्ट गरे । उनले अर्को बर्ष बिहे गर्ने बताएका छन् । यो बर्ष नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई ‘बिहेको बर्ष’को रुपमा हेर्न सकिन्छ ।
« Reply #13 on: April 13, 2015, 03:36:29 PM »
नेपाली चलचित्र क्षेत्र : रेखा,शिल्पाको अफयर देखि प्रियंकाको भित्रि बस्त्र सम्मको स्क्यान्डल
13 April 2015 17:50
नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा २०७१ साल त्यस्तो बर्ष बन्यो जसमा लागेको घाउ मेटिन अरु कुनै बर्षले सक्दैन |चलचित्रको व्यापार आफ्नो ठाउमा छ तर त्यो भन्दा बढी चर्चा यहाँ नायक नायिकाको भएको छ |चलचित्र सफल भए नभएपनि केहि नायक नायिका भने बर्ष भरि ई व्यस्त र चर्चित बने |
७१ सालमै बिवाह बन्धनमा बाधिएका नेपाली चलचित्रका कुशल अभिनेता श्रीकृष्ण श्रेष्ठको साउनमा निधन भयो |उनले निर्माण गरेको चलचित्र कोहिनुर रिलिज हुने बित्तिकै उनको निधन भएको थियो |बिवाह गरेको एक महिनामा भएको असामयिक निधनले समग्रह नेपाली चलचित्र क्षेत्र स्तब्ध बन्यो भने उनि अभिनित अन्तिम चलचित्र कोहिनुरले ब्यबसायिक रुपमा एउटा इतिहास नै कायम गरेको छ |नेपाली चलचित्रमा त्यो इतिहास तोड्न अहिले कसैले आट गर्न सक्ने अवस्था छैन |श्रीको निधन पछि विव्हल बनेकी उनकी पत्नी एबम नायिका श्वेता खड्काले आफ्नो श्रीमानको सम्झनामा लेखेको फेसबुक स्टाटसले पनि बर्षभरि नै चर्चा पायो |
बर्षको सुरुवातमा रिलिज भएको चलचित्र नोभेम्बर रेनले राम्रो व्यापार गर्यो |नायिका नम्रता र आर्यनको असफल हुने गरेको छापलाई यसले जोगायो |नम्रताको अरु चलचित्र ताण्डव र सम्बोधनले उनलाई केहि गर्न सकेन उनि जहाको त्यहि रहिन भने आर्यन सिग्देले खेलेको लज्जाले उनलाई थप उचाइ दियो अरु चलचित्रमा उनले सोचेजस्तो सफलता हात पर्न सकेनन |बर्षको सुरुवातमै बिवाह बाँधमा बाधिएका आर्यन सुरुवातमै चर्चित बने |
तुलनात्मक रुपमा प्रियंका कार्कीको चलचित्र धेरै नै रिलिज भए तर उनलाई नाइँ नभन्नु ल २ ले मात्र अलिकति राहत दिएको थियो भने नाइँ नभन्नु ल ३ ले पनि राम्रै सुरुवात गरेको छ |तर उनि यस बर्षकी चर्चित नायिका बनिन |उनका विभिन्न स्क्यान्डल र आफैले दिएका अभिव्यक्तिले उनलाई निकै चर्चित बनायो भने उनले लगाएको भित्रि बस्त्र देखिएको भनि मिडियामा आएको खबरले पनि उनलाई थप चर्चित बनायो |यो भन्दा पनि म्युजिक भिडियो र स्टेज कार्यक्रमले पनि यो बर्ष थप व्यस्त बनिन |‘मेरो बेष्ट फ्रेन्ड’, ‘आवरण’, ‘पुन्टे परेड’(विशेष भूमिका), श्री ५ अम्बरे(आइटम गीत), मिसन पैसा २ (आइटम गीत), ‘सुन्तली’, ‘माला’, ‘षडङ्ग’ चलचित्र असफल बने ।तर पनि उनको माग नेपाली चलचित्रमा कायमै छ |उनको अभिनयको पनि उत्तिकै चर्चा हुने गरेको छ |
नेपाली चलचित्रमा हिम्मतवाली नायिकाको रुपमा चिनिएकी नायिका रेखा थापा यो बर्ष पनि अरु बर्षहरुझैँ चर्चित बनिन |यो बर्ष उनको ३ ओटा चलचित्र प्रदर्शनमा आए |सबैमा उनको दमदार रुप देखिएको थियो तर हिम्मत्वाली चलचित्र भन्दा अरु चलचित्रले उनलाई खासै चिनाउन सफल भएन |चलचित्र सफल नभएपनि उनको चर्चा भने भैरह्यो |हिम्मत्वालीमा दुवै हात नभएका सुदर्शन थापालाई नायक बनाएकी उनले उनै संग नाम पनि जोडियो |सुदर्शनले पनि मन मिले बिवाह गर्न कुनै आपत्ति नभएको प्रतिक्रिया दिएपछि सम्बन्ध झन् चर्चित बन्यो र बिस्तारै हराउदै पनि गयो |बर्षको अन्तिम तिर भारतमा एउटा बिशेष कार्यक्रममा उनलाई नेपाली महानायिका भनि प्रचार गरिएको थियो |यसले पनि उनलाई थप चर्चित बनायो भने विभिन्न कार्यक्रम र भेटघाटले पनि उनलाई यो बर्ष व्यस्त बनायो |अहिले उनि चलचित्र राम्प्यारिमा व्यस्त छिन |
shilpa n chhabi
नायिका रेखा थापा संग सम्बन्ध बिच्छेद भएपछी एक्लै बस्दै आएका निर्माता छविराज ओझा र लज्जाबाट चलचित्रमा प्रवेश गरेकी नायिका शिल्पा पोख्रेलको सम्बन्धले पनि चर्चा पायो |छबिराजलाई आफ्नो बुबा सरह मान्ने शिल्पा र शिल्पाले प्रपोज गरे नाइँ भन्न नसक्ने अविब्यक्ति दिएका ओझा बिचको सम्बन्धले पनि चलचित्र खुबै तात्यो |नेपाली चलचित्रमा रेखा थापालाइ टक्कर दिने नायिका कोहि छ भने त्यो शिल्पाई हो भनि ओझाले अब रेखाको ठाउ शिल्पाले लिने बताउदै आएका छन |तर शिल्पाले यसलाई सिरियस रुपमा नलिएको बताएकी छन |
नायिका निता ढुंगाना पनि यो बर्षको अन्तिममा आएर चर्चित बनिन |उनले अभिनय गरेको एउटा मात्र चलचित्र भुल भुलैयाले उनलाई चर्चित बनाउदैछ |आफ्नो प्रेमीको नाम पनि उनले यसै बर्ष सार्बजनिक गरिन |दुइ बर्ष देखिको गुपचुप प्रेमलाई उनले फेसबुक मार्फत सार्बजनिक गरिन |अदालतमा गएर बिहे गरेको हल्ला आएपनि उनले कागजी बिहे नगरेको प्रतिक्रिया दिएकी छन |नेपाली चलचित्रमा आसलाग्दी नायिकाको रुपमा चिनिएकी उनि म्युजिक भिडियो र अन्य कार्यक्रमको शिलशिलामा ब्यस्त नै रहिन |
यो बर्षको अर्को चर्चित अर्को घटना सुरज गिरि र साहना बज्राचार्यको घटना हो उनीहरुको प्रेमले पनि यो बर्ष खुबै चर्चा पायो |अस्लिल क्रियाकलाप गरिरहेको अवस्थामा सार्वजनिक ठाउ बाट पक्राउ परेका उनीहरुले एक व्यवसायीलाई दिएको धम्कीले पनि चर्चा पायो |आफुहरु प्रेममा परेको भन्दै खुलेआम हिड्दै आएका उनीहरुको अस्लिल हर्कतले कान्तिपुर टेलिभिजनको जागिरबाट पनि निस्काशित हुनुपरेको थियो |
नेपाली चलचित्रमा नायिका निशा अधिकारीको चर्चा कम हुने गरेपनि यो बर्ष उनि सरद भेषवाकरसंगको सम्बन्धको कारण चर्चित बनिन |चलचित्रबाट खासै सफल हुन नसकेकी उनि सरद संगको प्रेममा भने सफल भएकी छन |सार्बजनिक ठाउमा पनि संगै हुने गरेका उनीहरु अहिले आफुहरु बीच प्रेम रहेको खुलेआम बताउन थालेका छन |नायिका निशाले सरद्को प्रेम यसै बर्ष स्वीकार गरेकी हुन् |यो भन्दा पहिला मिडियामा आएको हल्ला बेकार भएको भन्दै यो बाट आफु टाडा रहेको बताउदै आएकी थिईन |
नायिका सुष्मा कार्की नेपाली चलचित्रमा अश्लील हर्कत देखाएकै कारण ओझेलमा परि भने आफ्नो प्रेमी नरेन संगको सम्बन्ध बिच्छेदले पनि चर्चित बनिन |सार्बजनिक स्थलमै आफ्नो प्रेमीले आफुलाई कुटेको र जथाभाबी भनेको भन्दै एक बर्ष सम्म संगै बसेका उनीहरु अन्तत छुट्टिएका हुन् |सुष्माले आफ्नो प्रेमी आफ्नो लागि सधै भरिको लागि मरेको भन्दै उनको नाममा खोपको टाटु पनि हटाएकी छन |नरेनकै कारण आफु चलचित्रबाट ओझेलिएको भन्दै अब फेरी धमिलो भएको आफ्नो छविलाई संग्लो बनाउने प्रयासमा छिन |उनले अश्लील दृश्य दिनु आफ्नो गल्ति भएको भन्दै गल्तिको प्रयास्चित पनि गरेकी छन |यो बाहेक लोक गीतको म्युजिक भिडियो बाट पनि उनले राम्रै चर्चा पाएकी छन |
नेपाली चलचित्रमा केकी अधिकारी सोचेर र बुझेर बोल्ने क्षमता भएकी नायिका मानिन्छ |म्युजिक भिडियोमा राम्रै सग जमेकी उनले चलचित्रमा भने त्यति धुम मच्चाउन सकेकी छैनन् |त्यस्तो कुनै बिबादमा नपरेपनि उनले फेस्नुक्मा लेख्ने स्टाटस र उनको सकारात्मक अभिव्यक्तिको कारण चर्चित बनिन भने चलचित्र बाट खासै सफल हुन सकिनन् |उनले आस गरेको र आफुले सबै भन्दा न्याय गरेर भूमिका निर्वाह गरेको चलचित्र श्री ५ अम्बरेले उनलाई सफल बनाएन बहने पुनर्जन्मले केहि राहत दियो |यो बर्ष उनले आफ्नो बाबुले बैंकबाट लिएको ऋण समयमा तिर्न नसकेको भनि मिडियामा आएको प्रतिक्रियाका कारण भने केहि तनाबको सामना गर्न पर्यो |नेपाली संगीतका चर्चित गायक राजेश पायल राइ संग आफ्नो नाम जोडिएर आएको भन्दै उनले आफुले राजेश दिलाई तिहारमा टिका लगाइदिने अबिब्यक्ति दिदै फेसबुकबाट स्पस्टिकरण दिएकी थिईन |
केहि समय हराएकी नायिका नम्रता श्रेष्ठपनि यो बर्षको सुरुवातमै चर्चित बनिन नोभेम्बर रेनले उनलाई चर्चित बनायो |त्यसपछि सम्बोधन र ताण्डवले उनलाई असफल बनायो |प्रेममा पनि उनको सफल असफल भएको खबरहरि आइरह्यो |प्रेमी प्रेम घले सग छुटेको र मिलेको अनि आशिस लाउरे संग प्रेममा परेको खबरले पनि उनि चर्चित बनिन |तर जे भएपनि उनले चलचित्रबाट भने सोचे जस्तो सफलता पाउन सकिनन् |
नेपाली चलचित्रका महानायक राजेश हमाल यस बर्ष बिवाह बन्धनमा बाधिए |आफ्नो ९ बर्ष देखिको प्रेमलाई उनले यसै बर्ष विवाहमा परिणत गरे |बिहेकै कारण उनि चर्चित बने भने चलचित्रको कारण उनि चर्चित बन्न सकेनन |स्वदेश तथा बिदेशमा हुने कार्यक्रमले पनि उनि यस बर्ष व्यस्त बने |सधै भरि पुरानै शैलीमा ड्रेसअप गर्ने उनि बिहे पछि केहि आधुनिक जस्ता देखिए जसले उनलाई चर्चित बनायो |
नेपाली चलचित्रमा आर्यन सिग्देल ,जीवन लुइँटेल ,अनमोल केसी ,दयाहंग राइ ,गजित बिष्ट ,किशोर खतिवडा ,सबिन श्रेष्ठ ,सुबाश थापा ,संयम पुरी ,रेखा थापा,प्रियंका कार्की,,गरिमा पन्त ,केकी अधिकारी ,निता ढुंगाना ,नम्रता श्रेष्ठ ,जस्ता नायक नायिकाहरुको बलियो उपश्थिति रह्यो भने शिल्पा पोख्रेल ,अकेसा बिष्ट ,आना शर्मा ,जस्ता नायिकाको आगमन पनि भएको छ |बालकलाकार अनुभब रेग्मी र सुज्ञानी भट्टराईको अभिनयले पनि यो बर्ष चर्चा पायो |
चलचित्र धेरै रिलिज भएपनि तुलनात्मक रुपमा एक दर्जन चलचित्र मात्र सफल रहेका छन |नोभेम्बर रेन , कोहिनुर ,हिम्मतवाली,लज्जा ,कबड्डी ,नाइँ नभन्नु ल २ ,पुनर्जन्म ,झोले लगायत केहि चलचित्र मात्र सफल हुन सके |नेपाली समाजको वास्तविक चित्र बोकेको चलचित्र झोलाले चलचित्रबाट राम्रो ब्यापारको आस गरेपनि सफल हुन सकेको थिएन |१०० बर्ष अघिको जिउदो समाजको चित्रण यसमा देख्न पाइनेछ्न |यसै चलचित्रबाट अभिनेत्री गरिमा पन्तले सार्कको उत्कृष्ट नायिकाको अवार्ड समेत पाइन् तर नेपालमा यो चलचित्रले औसत व्यापार पनि गर्न सकेन र बैशाख ११ गरे बाट फेरी प्रदर्शनको तयारी गरेको छ |
विभिन्न चर्चा र नायक नायिकाको अबिब्यक्ति र निर्माता निर्देशकको बनाइ र दर्शकको टिप्पणीलाई हेर्ने हो बाहे यो बर्ष नेपाली चलचित्रले गएको बर्षहरुकै असफलतालाइ आत्मसाथ गरेको देखिन्छ |रिलिज भएको चलचित्र मध्ये जम्मा ५ प्रतिसत मात्र चलचित्रले ब्यापारिक सफलता हात पार्ने गएको बर्षहरुको कार्यलाई यो बर्षले पनि निरन्तरता दियो भने उपलब्धिमुलक काम केहि गर्न सकेन बरु आठ बर्षीय बालक सौगात बिष्टले सानै उमेरमा चलचित्र निर्माण गरेको भनि लभ यु बाबा बाट गिनिज बुकमा नाम लेखाए तर चलचित्र भने सफल हुन सकेन |उनको कामको प्रसंसा भयो तर दर्शकले उनलाई पत्याएनन |
२०७१ साल नेपाली चलचित्र जे जस्तो भएपनि ७२ सालमा केहि राम्रो हुने आस गरौ |नेपाली भएर नेपाली चलचित्र हेर्ने बानी बसाल्नुपर्छ |नेपाली चलचित्र कमजोर छ भनेर टिका टिप्पणी मात्र हैन के गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर सुझाब दिने गर्नुपर्छ |हलिउड र बलिउड सग नेपाली सिनेमालाइ तुलना गर्नु मात्र बुद्धमानी हैन |के कमजोरी छ हामी कहाँ चुक्यौ भन्ने कुराको पनि हेक्का राख्नुपर्छ |नेपाली चलचित्र असफल हुनुमा नायक नायिका ,निर्माता निर्देशक मात्र हैन हामी दर्शकपनि दोषी छौ |चलचित्र नै नहेरी नेपाली चलचित्र राम्रो हुन्न भन्ने बनि हामीले पनि हटाउनुपर्छ |सबै चलचित्र नराम्रा छैनन् र राम्रा पनि हुदैनन तर राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई यहाँ कमजोर छ भनेर औल्याउन सक्नुपर्छ |
« Reply #14 on: April 14, 2015, 12:58:00 PM »
खोजियो ढिँडो, पस्किइयो पिज्जा!
नेपाली दर्शकले नेपाली फिल्म हेरिदिएनन् भनेर गुनासो गरिरहने फिल्मकर्मीलाई यो वर्ष दर्शकले स्पष्ट जवाफ दिएका छन्। उनीहरूले भनेका छन्– नेपाली फिल्म हेरिदिनुपर्छ भने नेपाली फिल्म नै बनाऊ।
नेपाली माटोको गन्ध थोरै भए पनि मिसिएको फिल्मलाई नेपाली दर्शकले पनि माया दर्शाएका छन्। मुस्ताङका थकाली समुदायको संस्कृति समेटिएको फिल्म ‘कबड्डी’, गण्डक क्षेत्रको लवज बोलिएको ‘टलकजंग भर्सेस टुल्के’, मुस्ताङको लोकेसन र युवाको प्रेमकथा रहेको ‘जेरी’ हिट बनाइदिएर दर्शकले उदाहरण पेश गरेका छन्। यसबाहेक फिल्म रिलिजकै छेकमा दिवंगत श्रीकृष्ण श्रेष्ठले अभिनय गरेको फिल्म ‘कोहिनूर’ले पनि राम्रो आर्थिक उपार्जन गर्योक। ‘स्टारडम’को बलमा रेखा थापाको ‘हिम्मतवाली’ले लगानी उठाउने हिम्मत देखायो। स्थापित ब्यानरका कारण छवि ओझा निर्मित ‘लज्जा’ले उनको लाज बचाइदियो। प्रेम परियारको स्वरमा रहेको गीत ‘मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन’को चर्चाले ‘नाइँ नभन्नू ल–२’का निर्मातालाई जोगायो।
jeryहिन्दी र अंग्रेजी फिल्मको सहज पहुँचमा रहेका नेपाली दर्शकसँग छनोटको सुविधा र अधिकार प्रशस्त छ। आफूले खर्च गर्ने मूल्य बराबरको मनोरञ्जन फिल्मले दिन सक्छ कि सक्दैन? त्यो मापन गर्ने क्षमता पनि छ उनीहरूसँग। सत्य के हो भने अब नेपाली फिल्म सहानुभूतिले मात्रै चल्दैन। नेपाली दर्शकले नेपाली फिल्ममा खतरनाक एक्सन, भयभीत पार्ने हरर र अर्ती दिने सन्देशमूलक कथा खोजेका छैनन्। नेपाली फिल्ममा उनीहरू कमसे कम मौलिकता चाहन्छन्। अहिले बजारमा चलेको शब्द ‘अर्ग्यानिक’ नेपाली फिल्ममा होस्, खासमा दर्शकले खोजेको यत्ति हो। हिन्दी ‘विषादी’ र अंग्रेजी ‘रासायनिक मल’को प्रयोग नभइदिए नेपाली फिल्म फस्टाउनका लागि समय लाग्ने देखिँदैन।
कस्ता फिल्म बने?
नेपाली दर्शकको स्वाद नजाँचेर फिल्ममा लगानी गर्नेहरू यो वर्ष नराम्ररी चिप्लिए। यो वर्ष धेरै फिल्म एक्सन श्रेणीका बने। बलिउडका स्टार सलमान खान, आमिर खान, अजय देवगनहरूले एक्सन नै बिकाएपछि नेपालमा यो जान्रको बजार रहेको ठानेर निर्माता हौसिए। सलमानको फिल्म ‘किक’को समीक्षा गर्ने समयमा एक बलिउड फिल्म समीक्षकले भनेका थिए, ‘सलमानजस्ता स्टारहरूको फिल्मको समीक्षा गर्नु भनेको अन्डरवेयरमा आइरन गर्नु जस्तै हो।’ यसको अर्थ थियो– स्टारका फिल्म गतिला आइरहेका छैनन्। उनीहरूका फ्यानले हेरिरहेका छन्। ‘राम्रो छैन फिल्म’भन्दा पनि दर्शक जान्छन् भने किन कमेन्ट गर्नु?
नेपाली फिल्म निर्माताले यो बुझेको देखिएन। हिन्दी फिल्म ‘किक’, ‘सिंघम रिटर्न्स’, ‘धुम’ले नेपाली फिल्म हल पनि कब्जा गरेपछि धेरैलाई एक्सनमोहले तान्यो। ठूलो बजेट यस्तै प्रकारमा फिल्ममा खर्चिएको छ। धेरै लगानी गरिएको भनिएका ‘मुखौटा’, ‘मिसन पैसा–२’, ‘वान वे’, ‘हँसिया’ले एक्सनको बाटो पछ्याउँदा ती भीरबाट गुल्टिए। माथि उल्लेखित फिल्मले ‘हाइप’ मात्रै सिर्जना गरेका थिएनन्, तिनलाई आशलाग्दा फिल्मका रूपमा पनि हेरिएको थियो।
ग्याङस्टार कमेडी ‘षडङ्ग’, सस्पेन्स थि्रलर भनिएको ‘झिग्राना’ पनि दर्शकले हेर्न चाहेनन्। यीबाहेक ‘आवरण’ र ‘माला’ जस्ता दर्शकलाई तर्साएर मनोरञ्जन दिन खोज्ने फिल्मले अन्ततः निर्मातालाई नै तर्साइदिए।
यो वर्ष आश गरिएका फिल्म नचलेर अरूले नै बाजी मारेपछि फिल्म चल्नै छाडेको निष्कर्षमा फिल्मकर्मीहरू पुगेका छन्। प्राविधिक रूपमा नेपाली फिल्म स्तरीय हुँदै छ। फिल्म पढेकाहरू र अभिनय सिकेकाहरू फिल्ममा आइरहेका छन्। नयाँ प्रयोग पनि भइरहेको छ। निर्माणका प्रक्रियामा पनि यस वर्ष धेरैले दिमाग चलाएका छन्।
हिमग्याप लामाको निर्देशनमा किसान नेता भीमदत्त पन्तमाथि बनाइएको फिल्म ‘भीमदत्त’ र घुसखोरीविरुद्ध हेमराज बीसीले बनाएको ‘सम्बोधन’ नेपाली फिल्म आर्काइभका लागि महŒवपूर्ण छन्। त्यसैगरी थकाली संस्कृतिको पाटो उठाउने रामबाबु गुरुङ निर्देशित ‘कबड्डी’ र ‘कामकाजी’ नेपाली भाषाभन्दा माथि उठेर गण्डक क्षेत्रको मौलिक लवज बोल्ने ‘टलकजंग भर्सेस टुल्के’पनि परिवर्तनको मार्गमा हिँडिरहेको नेपाली फिल्मका लागि मार्गदर्शक बनेका छन्। अनि, भाष्कर ढुंगानाले फिल्म ‘सुन्तली’मार्फत मौलिक कथा भन्ने तरिका ल्याएका छन्। अघिल्लो वर्षको अन्त्यमा रिलिज भए पनि फिल्म ‘झोला’ले सफलता यही वर्ष हासिल गरेको हो। कृष्ण धरावासीको बहुचर्चित कथा ‘झोला’मा आधारित फिल्मले सय वर्षअघिको नेपाली जनजीवनलाई उठाएको थियो। सती प्रथामा आधारित फिल्मलाई दर्शकले रुचाए। ‘सार्क फिल्म फेस्टिभल २०१४’मा यही फिल्मबाट गरिमा पन्तले उत्कृष्ट नायिकाको अवार्ड जितिन्। फिल्म’साँघुरो’का निर्देशक जोयश पाण्डेले ‘स्पेसल जुरी अवार्ड’ प्राप्त गरे। आठ वर्षीय बालक सौगात विष्टले ‘लभ यू बाबा’ नामक फिल्म निर्देशन गरेर दुनियाँलाई चकित बनाइदिए। गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्समा विश्वका सबैभन्दा कान्छा फिल्म निर्देशकका रूपमा आफ्नो नाम दर्ज गराए।
दिमाग चलाउनुपर्छ, फिल्म चल्छन्
लगानी उठाउने मुश्किलले आठ फिल्म भए पनि २०७१ सालमा ७६ वटा फिल्म रिलिज भए। यसरी हेर्दा ९० प्रतिशत फिल्ममा गरेको लगानी डुबेको छ। अब दिमाग चलाउन जरुरी छ। बनाइन्छ के र हेरिन्छ के? किन बनाउने वा कसका लागि बनाउने? यी र यस्ता प्रश्नमा घोत्लिनैपर्छ।
अर्काे महत्वपूर्ण प्रश्न फिल्मकर्मीले आफैँलाई सोध्नुपर्छ– फिल्म होइन, दिमाग पो नचलेको हो कि? दिमाग नै सही विषयमा नचलेपछि फिल्म कसरी चलोस्? दोष फिल्मलाई होइन, आफैँलाई दिनुपर्छ। यति इमानदारी देखाउनैपर्छ। हरेक कुरामा बजार हाबी भइरहेको वर्तमान समयमा निर्माण प्रक्रियामा मात्रै दिमाग चलाएर फिल्म चल्न सक्दैन। गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गरेपछि त्यसलाई उपभोग गर्न उक्साउने, स्वादमा बानी पार्ने र गुणस्तरमा विश्वास दिलाउने बजारका सामान्य प्रक्रिया हुन्।
नेपाली फिल्मका दर्शकले फरक स्वाद खोजिरहेका छन्। विशेषगरी नेपाली फिल्ममा नेपालीपन खोजिरहेका छन्। ‘नेपाली भान्साघर’ लेखिएको बोर्डभित्र ढिँडो र गुन्द्रुकको अपेक्षा गरिन्छ नै। पिज्जा र बर्गर खानका लागि ‘नेपाली भान्साघर’मा किन जाने? दर्शकले ढिँडो खोजिरहने र फिल्मकर्मीले पिज्जा पस्किरहने त भइरहेको छैन?
« Reply #15 on: April 15, 2015, 02:45:14 PM »
Top5movie songs of 2071
« Reply #16 on: April 21, 2015, 08:58:51 AM »
अश्लिल हर्कत गर्ने नायिकाहरुकै कन्तबिजोग
नेपाली सिनेमा यस्ता आएका थिए कि, परिवारका सबै बसेर डाइलग सुन्न लायक थिएनन्, दृश्य हेर्न लायक थिएनन् । नांगिनेमात्र होइन, अश्लिल सम्वाद बोलेर पनि सफल नायिका भइन्छ भन्ने भ्रममा सिनेमामा आएका नायिकाहरु अहिले कता हराए ? अनि अनेक बहानामा आफूलाई चर्चामा ल्याइरहन चाहने नायिकाहरुको शैलीले पनि नवआगन्तुकले केही सिकेरमात्र सिनेमामा आउनु पर्ने हो कि ? नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छः नायिकाहरुको हेरौँ कन्तबिजोग ।
एकताका यौनजन्य चलचित्र निर्माणको लहर चलेको थियो । दर्शकका लागि भन्दै अश्लील संवाद तथा दृश्य खिच्ने र खिचाउनेहरू बग्रेल्ती थिए । आफ्नो कला, प्रतिभाले नभई अश्लीलताको भरमा हिट हुन खोज्नेहरूको कालान्तरमा भागाभाग भएको छ । यसमा निर्धक्क खुल्ने ‘हिरोइनहरू’ मात्र नभई उनीहरूलाई नंग्याउँदा रातारात पैसा कमाइन्छ भन्ने मनशाय राख्ने निर्माता, निर्देशक पनि उत्तिकै भागिदार छन् । अहिले उनीहरूको चुरिफुरी बन्दै भएको छ ।
हिरोइन बन्न लामो समय संघर्ष गरेकी बिनिता बराललाई सबिर श्रेष्ठ र कृषा चौलागाईंले के म तिम्रो साथी बन्न सक्छुबाट निकाले । त्यसपछि सुरु भयो उनको नाटक । ‘आत्महत्या गर्छु’ भन्नसम्म पनि पछि नपरेकी उनलाई हिरोइन बनाए दीपेन्द्र के. खनाल र अर्जुनकुमारले– चपली हाइटमा । सो फिल्ममा उनले मज्जाले एक्सपोज गरिन् । सहरका चोकचोकमा लागेका उनका नग्नप्रायस् होर्डिङले गर्दा ट्राफिक मात्र नभई सर्वसाधारण पनि हैरान भए । बिनिताको लगभग नग्न फोटामा ध्यान केन्द्रित हुँदा सवारी दुर्घटना बढ्न गएको ठहर गरी महानगरपालिकाले ती होर्डिङबोर्ड हटाएरै छाड्यो । अर्कातिर, त्यसअघि बिनिताले आफ्ना फोटामा निर्माताले ‘ट्रिक’ गरेर खोलिदिएको भन्दै पत्रकार सम्मेलन पनि गरिन् । मिडियामा हंगामा मच्चाएर फिल्म हिट बनाउने रणनीतिस्वरूप गरिएको सो नाटकको लगानीकर्ता पनि निर्माता अर्जुनकुमार नै थिए । ‘फिल्मलाई त फाइदा भयो नि,’ चपली हाइट हिट भएपछि अर्जुनले फुत्काइहाले, ‘त्यत्ति नगरेको भए के हुन्थ्यो हुन्थ्यो नि ।’
आफूले निकै बोल्ड भूमिका निभाएको भन्दै बिनिता आत्मरतिमा रमाइन् । चपली हाइट हिट भयो । तर, हिरोइनले सोचेझैँ उनको हातमा भटाभट फिल्म परेनन् । उनले अभिनय गरेको अर्का फिल्म फुलस्टपले त झन् उनको करिअरमै फुलस्टप नै लगाइदियो भन्दा पनि हुन्छ । यद्यपि, उनले अभिनय गरेको सुपरहिट कहिले रिलिज हुन्छ, थाह छैन । नग्नताको आडमा सफलता नमिलेपछि उनी तरकारी खेतीमा लागिन् । तरकारी खेती, बिक्री, उपन्यास लेखनका साथै हालै उनले उमंग नामक फिल्ममा अभिनय गरेकी छिन् । उनको अभिनय करिअर भने निराशाजनक नै छ ।
एटिएम फिल्ममा अभिनय गरेर नामभन्दा बढी बदनाम कमाएका तीन हिरोइन हुन्– जिया केसी, सबिना कार्की र सोनिया शर्मा । उनीहरूसँगै सो फिल्मका निर्माता हिरो– दिनेश थापा र निर्देशक यादव सिलवालले पनि निकै आलोचना खेपे । खासमा एटिएमकै अश्लील प्रोमोका कारण फिल्म क्षेत्रमा हंगामा मच्चिएको थियो । सो प्रोमोले जिया, सोनिया, सबिना र दिनेशलाई समेत सार्वजनिक ठाउँमा खुलेआम हिँड्न गाह्रो पारेको थियो । केही समय सेन्सरले अवरोध गरेको फिल्मलाई रिलिजकै दिन प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । एटिएमजस्ता फिल्म बन्न थालेपछि अब नेपाली फिल्मको हालत के हुन्छ भन्ने ठूलो बहस सिर्जना भएको थियो ।
एटिएमका कारण आलोचित भएकी जियाले यौनजन्य दृश्य दिन भने त्यसपछि पनि हिच्किचाइनन् । उनले दीपक श्रेष्ठले निर्माण गरेको रङ वेमा मात्र नभई बर्बाद नामक फिल्ममा पनि खुलेरै एक्सपोज गरिन् । आमाको आशिर्वाद, गाउँले, भाइ, दुस्ख, आफ्नोपन जस्ता पारिवारिक फिल्म निर्देशन गरेका निर्देशक दीपक श्रेष्ठ रङ वेका कारण सर्वत्र आलोचित भए । फिल्म पनि सुपरफ्लप भयो । त्यसकारण त अचेल उनी फिल्म क्षेत्रबाट गुमनाम छन् । अचेल दीपक श्रेष्ठको नाम भन्नेबित्तिकै फिल्मकर्मीहरू नाक खुम्च्याउने गर्छन् ।
एटिएम, रङ वेकी जिया पछिल्लो समय फिल्मविहीन छिन् । अभिनेता भुवन केसीसँग अफेयरमा रहेकी उनलाई भुवन स्वयंले नै आफ्नो फिल्ममा नलिने बुझ्नमा आएको छ । त्यसैगरी, एटिएमका साथै करामत, ढुंगेयुग, कुर्वानलगायतका फिल्ममा अभिनय गरेकी सोनिया पनि फिल्म अभिनयबाट टाढिएकी छिन् । सबिनाले भने आफ्नो गल्ती स्विकार्दै आगामी दिनमा त्यस्ता उच्छृंखल फिल्ममा नखेल्ने घोषणै गरेकी छिन् । सबिना अभिनीत लाटी फिल्म १५ जेठमा रिलिज हुँदै छ ।
विजयगोपाल दली र सुरज आरडीले निर्माण गरेको रिङरोड नामक फिल्ममा पनि यौनलाई बढावा दिइयो । सो फिल्ममा उषा खरेल नामक युवतीले खुलेरै यौनजन्य दृश्य दिइन् । अश्लीलता पस्कँदा हिट भइहाल्छु भन्ने ठानेकी उषालाई न कसैले चिने, न खोजे । फिल्म आए–गएको पत्ता भएन । रिङरोड हेर्नेले उनलाई लाज पचेकी केटी भन्दै सरापे ।
सिलसिला फिल्ममा राज तिमिल्सिनासँगै टङ किस सिन दिएर एकाएक चर्चामा आएकी सोनिया केसी पनि लामो समय टिकिनन् । उनले राज भाइ नामक फिल्ममा पनि खुलेरै अंगप्रदर्शन गरिन् । तर, त्यो फिल्म रिलिज नै भएन । यौनको मामलामा खुलेर अन्तर्वार्ता दिने सोनिया केही समययता फिल्म अभिनयबाट ओझेलमा परेकी छिन् । निर्माता रिमेश अधिकारीसँग ब्रेकअपपछि उनले फिल्मलाइन बाहिरको पुरुषसँग सुटुक्क घरजम गरेको सुन्नमा आउँछ ।
एकताका सुमिना घिमिरे पनि यौनजन्य फिल्ममा बग्रेल्ती देखिइन् । उनले नाइन अ’क्लोक, लभ फरएभर, स्टार, हेलो डार्लिङजस्ता फिल्ममा आफूलाई खुलेर प्रस्तुत गरिन् । दुलहीजस्तो सरिफ फिल्ममा शीर्ष भूमिका हेरेका दर्शकले कपडा खोलेकी सुमिनालाई मन पराएनन् । फलस्वरूप उनले अभिनय गरेका फिल्म फ्लप मात्र भएनन्, हुँदाहुँदै उनको हातमा फिल्म पर्नै छाडे । अन्तत: उनले गत फागुनमा सुटुक्क बिहे गरिन् । अब उनी फिल्ममा कहिल्यै फर्किनेछैनन् रे ।
हिन्दी फिल्म लभ इन नेपालमा गरेको ओभर एक्सपोजका कारण झरना बज्राचार्य निकै आलोचित भइन् । एक त उनले अभिनय गरेका नेपाली फिल्म हिट भएनन् नै, हिन्दी फिल्मबाट पनि उनले सास्ती नै व्यहोर्नुपर्यो । अन्तत: उनले पनि फिल्मलाई माया मार्दै गृहस्थ जीवन रोजिन् ।
०५३ सालमा मदन घिमिरेको निर्देशनमा बनेको आमाको माया फिल्ममा बच्चालाई स्तनपान गराएको दृश्य दिएकी अभिनेत्री निलु रायमाझी केही समय चर्चामा छाइन् । तर, पछि उनलाई त्यही चर्चा घाँडो भयो । लाज नभएकी केटी भनेर उनलाई हेय दृष्टिले हेरियो । जसकारण उनको फिल्मी करिअर त्यहीँ स्टप भयो । त्यसैगरी, सम्पत्ति फिल्ममा स्विमिङकस्टम लगाएकी सिनोरा मित्री, धर्म र सान्नानीमा खुलेरै एक्सपोज गरेकी तुलसा सिलवाल, आन्दोलन फिल्ममा पुरुषको बलात्कार गरेकी नीलम केसीहरू टिक्न सकेनन् । उनीहरूको उदय र विलयबाट नवोदितहरूले पाठ सिकिसकेको हुनुपर्ने हो ।
« Reply #17 on: December 25, 2016, 10:05:35 PM »